Thousands of children joined Lactogrow 3’s biggest birthday bash in Yangon – LYCA COMMUNICATIONS
Date: December 23, 2018Author: Rahul0Comments
Yangon – December 23, 2018– Nestlé Lactogrow3celebrated its birthday withaCarnival Land theme celebration in Yangon today, joined by thousands of children aged3to6years old from private schools and orphanages.
In addition, students aged3to6years old from any school were also given the opportunity to participate inagroup performance contest. The first, second prize and third prize winners walked away withacash prize of Ks(300,000), Ks(200,000) and Ks(100,000) respectively.
Children who attended the birthday celebration were also givenaCarnival Land passport to exchange for free gifts at game booths during the event. To add to the festivities, the party also featured booths selling children’s products including clothes and accessories.
Gracing the event was renowned singer He Lay, and actress Melody, Htate Htar Tha Khin and Khit Khit. Other activities during the celebration includedacarnival dance and games that were hosted on-stage.
The 2ndprize (Universal Studios Singapore) and 1stprize winners (Hongkong Disneyland) of Lactogrow3National Consumer Promo will be announced in February. Consumers can still participate until the end of December by buying Lactogrow3 600g to win phone top-up and overseas family trips.
ရန်ကုန်မြို့တွင်ကျင်းပသော Lactogrow3၏ အကြီးကျယ်ဆုံး မွေးနေ့ ပွဲကို ကလေးအယောက် တစ်ထောင်ကျော် ပါဝင်ဆင်နွှဲ
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၃)ရက်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် – နက်စလေ(Nestlé) မှ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သော Lactogen3နို့မှုန့်၏ အကြီးကျယ်ဆုံး မွေးနေ့ ပွဲကြီးကို Carnival Land အသွင်ဖြင့် ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းနှင့် မိဘမဲ့ ကလေးဂေဟာ တို့ မှ အသက် (၃)နှစ်မှ (၆)နှစ်ကြား ကလေးစုစုပေါင်း အယောက် (၁,၀၀၀)ကျော် ပျော်ပျော်ပါးပါး ပါဝင် ဆင်နွှဲ ခဲ့ကြသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့က ပြည်သူ့ ဥယျာဉ်တွင် စည်စည်ကားကား ကျင်းပခဲ့သော Lactogrow3၏ အကြီးကျယ်ဆုံး မွေးနေ့ ပွဲကို မိဘ(သို့ ) အုပ်ထိန်းသူများ နှင့်အတူ ပါဝင်ဆင်နွှဲရန် ဖိတ်ကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခမ်းအနားတွင် Nestlé Myanmar Limited ၏ Business Manager (NIN) ဖြစ်သူ မစ္စစ် မိုင်လာ (Ms. Michelle Ailah Capanzana)မှ တက်ရောက်ခဲ့ကြသော ဧည့်သည် တော်များကို ကြိုဆိုခဲ့သည်။
“အခုလို အကြီးကျယ်ဆုံးသော မွေးနေ့ ပွဲကို ကလေးအယောက် တစ်ထောင်ကျော်အပြင် မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူတွေက ကျွန်မတို့ နဲ့အတူတကွ ပါဝင်ဆင်နွှဲတာကို မြင်ရတာအရမ်းကို ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်။ ကလေးတွေ ကျန်းမာ၊ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ကြီးပြင်းလာတာကို မြင်ရတာလောက် ကြည်နူး စရာကောင်းတာ တခြားမရှိဘူးလို့ ကျွန်မတို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် နောင်လည်း ကလေးတွေ အတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်တွေကို ပိုမိုဖန်းတီးပေးဖို့ မေ ျှာ်လင့်ပါတယ်။”ဟု မစ္စစ် မိုင်လာ ကပြောသည်။
မွေးနေ့ ပွဲကြီးတွင် မည်သည့်ကျောင်းမဆိုမှ အသက်(၃)နှစ်မှ (၆)နှစ်အတွင်းရှိ ကလေးများကို အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ Group Performance Contest များဖြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိင်စေခဲ့ပြီး ပထမဆု ကျပ်သုံးသိန်း၊ ဒုတိယဆု ကျပ်နှစ်သိန်း၊ တတိယဆု ကျပ်တစ်သိန်း တို့ကို အသီးသီး ချီးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။
ထို့အပြင် မွေးနေ့ ပွဲကြီးသို့တက်ရောက်လာသော ကလေးများအားလုံးကို Carnival Land Passport များပေးအပ်ပြီး စီစဉ်ထားသော ဂိမ်းများကစားပြီးပါက Passport အားပြသ၍ လက်ဆောင်များ လဲလှယ်ပေးသည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့သည့်အပြင် ပွဲတော် ပိုမိုစည်ကားရန် အတွက် ကလေးများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများ၊ အဝတ်အထည် ဆိုင်ခန်းများကိုလည်း ဖွင့်လှစ် ပေးခဲ့သည်။
အခမ်းအနားကို အဆိုတော် ဟဲလေး၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီ၊ ထိပ်ထားသခင်နှင့် ခေတ်ခေတ် တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အခြားအစီအစဉ်များအဖြစ် Carnival အကဖျော်ဖြေမှုနှင့် စင်မြင့် ထပ်တွင် ဂိမ်းကစားခြင်းတို့ပါ ထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အခမ်းအနားတွင် Nestle Myanmar မှ မိသားစုများ ပျော်ရွှင်စေရန် တတိယဆု ဘန်ကောက် ခရီးစဉ်နှင့် နှစ်သိမ့်ဆု ရန်ကုန် Waterboom ဝင်ခွင့် ပါဝင်သည့် “Lactogrow3Grow Happy” ပြိုင်ပွဲကိုလည်း ပူးတွဲကျင်းပခဲ့သည်။
Lactogrow3အကြောင်း
Lactogrow3သည် အသက် (၂) နှစ်နဲ့ အထက်ကလေးငယ်တွေအတွက် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု အထောက်အကူပြု နို့မှုန့် ဖြစ်သည်။ ဤအသစ်မွမ်းမံထားသော ဖော်စပ်မှုတွင် သင့်ကလေး၏ တစ်နေ့တာအား ပျော်ရွှင်စွာ စတင်စေနိုင်မည့် မှန်ကန်သော အာဟာရ ပေါင်းစပ်မှုများ ပါဝင် ပါသည်။ Lactogrow 3, HappyNutri တွင် L.Comfortis တစ်နည်းအားဖြင့် လတ်တို ဘက်ဆစ်လပ်ရုတရိုင်း ကဲ့သို့ ခန္စာကိုယ်အတွက် အကျိုးပြု အာဟာရဓာတ်များ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် သင့်ကလေးငယ်၏ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ အစာချေစနစ်ကို အထောက်အကူပြုပြီး ဝမ်းဗိုက် မအီမသာ ဖြစ်ခြင်း အား လျော့ကျစေကာ သက်တောင့်သက်တာ ရှိစေပါသည်။
Nestlé Myanmar အကြောင်း
Nestlé သည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် ရုံးချုပ်တည်ရှိထားသော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အစားအသောက်နှင့် အဖျော် ယမကာ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အနှံ့ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၁ နိုင်ငံတွင် Nestlé တည်ရှိပြီး ပိုမိုကျန်းမာသော အနာဂတ်ကို ဖန်တီးထူထောင်ရန်နှင့် ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံများကို အရည်အသွေး မြင့်တင်ရန်ဖြစ်သော Nestlé ၏ ရည်မှန်းချက်ကို ဖြစ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် Nestlé ၏ ဝန်ထမ်း ပေါင်း (၃၂၈,၀၀၀) ကလည်း ကတိကဝတ် ပြုထားကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာဟာရ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကျန်းမာခြင်းကဏ္ဍများ အတွက် အားသွန်ခွန်စိုက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့မှ စားသုံးသူများကို ကျွန်တော်တို့၏ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ထုတ်ကုန်များဖြင့် အာဟာရ ဖြည့်တင်း ပေးနေသည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၁၅၀)ကျော်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
Nestlé Myanmar Limited ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စီးပွားမိတ်ဖက် ဖြစ်သော Myanmar Distribution Group (MDG) ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် မြန်မာစားသုံးသူတွေအတွက် ဂုဏ်ယူစွာ ဖြန့် ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိသည်။
Lactogrow3LycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMyanmarMyanmar PR AgencyNestleNestle MyanmarNutritionPRPress ReleasePublic RelationsTeam LycaYangon